headaches – Healthy Life Journal
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါအကြောင်း သိထားသင့်သည့် အံ့ဖွယ်အချက် ၁၀
——၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——- ထောပတ်သီး၊ ပဲနီလေး စတာတွေကို စားတာကြောင့် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်အောင် လှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လို့ သင်ထင်နေပါသလား၊ ဒါမှမဟုတ် တချို့ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ ကုသဆေးတွေက တကယ်ကိုခေါင်းကိုက်စေနိုင်တယ်လို့ သင်ယူဆပါသလား။ (၁) ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်ထဲ ရေးမှတ်ထားတာက သက်သာစေပါတယ် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ...
နံနက်အိပ်ရာနိုးချိန်မှာ အဆိုးဆုံးခံစားရတတ်တဲ့ ဝေဒနာတွေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားသင့်သလဲ
—–၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊—– ချောင်းဆိုးခြင်း အက်စစ်ဆန်တက်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လည်ချောင်းယားယံတဲ့ဝေဒနာဟာ နံနက်စောစောမှာ ချောင်းဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ အိပ်စက်စဉ် လှဲလျောင်းနေတာကြောင့် အစာအိမ်ကနေ အစာရေမျိုပြွန်နဲ့ အပေါ်ပိုင်း အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆီကို အက်စစ်ဆန်တက်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းခံစားရပြီး ချောင်းဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့ ညဉ့်နက်ချိန်မှာ အစာများများစားတာကိုရှောင်ပြီး...
Q. အလေးမလိုက်တာ ခါးမျက်သွားလို့ ဘာဆေးသောက်ရမလဲ။ A. ဒါကတော့ ဆေးဆိုင်မှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ အကုန်လုံး သောက်လို့ရပါတယ်။ ခါးကို မတ်မတ်ထားရပါမယ်။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကို အစာစားပြီးတိုင်း ၂ ရက်တန်သည်၊ ၃ ရက်တန်သည် သောက်ကြည့်မယ်။ ကုန်းကုန်းကွကွ မလုပ်ရပါဘူး၊...
ခါးကြွက်သားတောင့်တင်းမှုပြေလျော့ပြီး ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ သက်သာစေမည့် နံရံကို ခြေဆန့်မှီခြင်းကျင့်စဉ်
ကိုထက် မူလအနေအထား-နံရံနားကပ်ပြီး ဖျာတစ်ချပ်ပေါ်မှာ လှဲနေပါ။ ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ • ကျောအောက်ပိုင်းအောက်မှာ စောင်ခေါက်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ဖက်ခေါင်းအုံးအသေးတစ်ခုကို ထားပါ။ • သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလှိမ့်ပြီး ခြေထောက်ကို နံရံနဲ့ ကပ်ရပ်ဆန့်တန်းလိုက်ပါ။ • ပုံမှာပြထားတဲ့ အနေအထားအတိုင်း ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအနေအထားအတိုင်း...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ သက်သာစေရန်
ငွေကြယ်စင်ယံ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာကောင်းသလို ကြည်နူးဖွယ်ရာလည်း ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံမကောင်းတဲ့အချက်က ကိုယ်ဝန်ပထမသုံးလတာ ကာလအတွင်း ခေါင်းကိုက်တာက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ဝေဒနာတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာသက်သာစေဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ (၁) များများ အနားယူပါ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ပထမသုံးလတာကာလအတွင်း...
၊ လရိပ်မေ ၊ နေပူဒဏ်ခံရလိုက်၊ အဲကွန်းခန်းထဲဝင်လိုက် . . အဲဒီလို အပူအအေးပြောင်းလဲမှုနဲ့ အနေအထိုင် မှားယွင်းမှုတို့ကြောင့် မကြာခဏ ခေါင်းကိုက်တတ်သူတို့အတွက် ဝေဒနာသက်သာစေမယ့် သဘာဝနည်းတွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ – ငြိမ်သက်ပြီး မှောင်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ အနားယူပါ။ ဒါဆိုရင် ညဘက်မှာ...